Graff आदिवासी - उच्च गहना सपना
आकाशका ताराहरूदेखि सूर्यसम्म मरुभूमिको टिब्बा हुँदै पृथ्वीलाई उज्यालो बनाउँछ। ग्र्याफको आदिवासी एक कामुक, उल्लेखनीय र गहिराइलो बनाउने उच्च गहना संग्रह हो जुन प्रकृतिको गहिराइ सौन्दर्य र हाम्रो जीवनमा यसको अर्थपूर्ण उपस्थितिको गहिरो आत्म बोल्छ।
विश्वको रूपमा पुरानो कथाले ग्राफलाई नयाँ र कामुक उच्च गहना संग्रह डिजाइन गर्न प्रेरित गरे: जनजातीय.
Graff आदिवासी उच्च गहना संग्रह
स्थान: एट्लान्टिस डुन्स, पश्चिमी केप, दक्षिण अफ्रिका
दिशा: मिकाएल जनसन
ताराring्कन: सारा Sampaio
मिकाएल जेन्सन, फिल्म निर्देशक, ठूलो, कालो इस्पात मूर्तिकलाहरु को दुवै प्राकृतिक परिदृश्य को एक उच्च कन्ट्रास्ट पृष्ठभूमि प्राप्त गर्न चाहन्थे। जनजातीय संग्रह र Sampaio गहना लगाएका।
जनजातीय: डिजाइन प्रेरणा
मरुभूमिमा गहिरो, एउटी केटी राति आगोको वरिपरि नाचे। केही चम्किरहेका कक्षहरू लिई, तिनीहरूलाई माथि हावामा फ्याँकियो जहाँ तिनीहरू जादुई तारामा परिणत भए, आकाशमा हिरेजस्तो पिच-कालो रातलाई उज्यालो पारे।
ताराहरू सिर्जना गर्ने केटीको दन्त्यकथा पौराणिक भूतपूर्व हो। जब समय अन्धकारमा छ, यो पछिल्लो वर्ष जस्तै, मानवजाति विगतमा फर्किन्छ जो उज्यालो र सकारात्मक देखिन्छ, शान्ति पाउन र भविष्यलाई अझ सकारात्मक दृष्टिकोणको साथ हेर्न।
यो एक कथा हो जुन आज बोल्छ र हामीसँग गुंज्याउदै छ किनकि यो सुन्दरता, प्रकाश, आश्वासन र सदाको लागि कथा हो।
र जनजातीय, नयाँ उच्च गहना संग्रह ग्राफ द्वारा हस्ताक्षर गरिएको, यी सबै प्रतिनिधित्व गर्दछ।
गत २० मार्च सुरू भयो, वसन्त इक्नोक्स, को साथ पign्क्तिबद्धमा जनजातीय उच्च गहना संग्रहले पुरानो प्रतीकहरूको सम्झना गर्दछ। यी प्रतीकहरू हाम्रो पैतृक स्मृतिमा प्रभावित छन् र असाधारण रत्नहरू र हीराद्वारा बनाइएको हो।
उच्च गहनामा भिजुअल भाषा महत्त्वपूर्ण छ र यो विचार, अवधारणा, एक दर्शन संचार गर्नका लागि विशेषाधिकार प्राप्त माध्यम हो।
यस कारण यस संग्रहका रत्नहरूले हामीसँग पुरानो आयामको कुरा गर्छन् जुन हामीसँग सम्बन्धित छ। एउटा पुरातन भूतकाल हामी सहज रूपमा सम्बन्धित छ।
साँझदेखि बिहानसम्म जनजातीय संग्रहले हामीलाई प्राकृतिक प्रतीकहरूको पुन: खोजीको यात्रामा साथ दिन्छ।
Graff आदिवासी उच्च गहना
यस आकृतिले भविष्यलाई भूत र अर्को आयामलाई जोड्दछ। गहनाको अंडाकार आकार यस जडानको ग्राफिक प्रतिनिधित्व हो, र यो संग्रहको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दृश्य तत्व हो।
यस बाहेक, गोलाकार काट्ने हीराहरू धेरै सूक्ष्म सेतो सुनको माउन्टमा सेट हुन्छन्, ढु stones्गाहरू चम्काउन र उनीहरूको पूर्ण चमक प्रकट गर्नका लागि।
प्रभात दिनको त्यो क्षण हो जब सूर्य पृथ्वीमा फेरि चम्किन्छ। यस समूहका रत्नहरूले सूर्यको उदाउँदो प्रकाश फस्टाउँदछन्।
सेतो र पहेलो हीरा मिक्स गरेर, रत्नहरूले ऊर्जा र शक्ति सञ्चार गर्दछ कि एक चमक बगाउँदछ, हीरा को उत्तम "चिसो" आगो द्वारा वृद्धि।
यहाँ छविमा चित्रित नेकलेस तल 374 10.56 सेता र पहेलो हीराको सुविधा दिन्छ। यसको केन्द्रमा एक १०..XNUMX-क्यारेट नाशपाती आकार फेन्सी भिभेट पहेलो हीरामा बस्दछ। एक प्रामाणिक सनबर्स्ट।
नयाँ बिहान मोटिफ
रेडियन्ट प्रभाव पनि डिजाइनमा नै जोड दिइएको छ, जुन बाहिर सारेर पछिल्लो अमूर्त रेखा विकसित गर्दछ।
सेतो सुन र सेतो हीरा हार।
सूर्यको परिक्रमा पछि चन्द्रमा आकाशमा देखा पर्दछ। गहनाहरूले एक प्राकृतिक आकृति एक शैलीबद्ध आधा चन्द्रमा को माध्यम बाट प्रस्ताव गर्दछ जुन डिजाइनमा पूर्ण केन्द्र लिन्छ।
हाम्रो सेटेलाइटको पूर्ण सेतो सम्झँदै, सेतो हिराले सेतो सुनको डिजाइन गर्‍यो र यसको प्रत्येक बक्र प्रकाश पार्दै।
पहेंलो हीराले सेतो प्रकाश पोंक्टुएट गर्दछ, अधिक कन्ट्रास्ट सिर्जना गर्दछ। ग्रफले एक असाधारण रत्नहरूको कास्केडको साथ फ्रिंज हारलाई पुन: स्थापित गर्दछ जुन उल्लेखनीय र color्ग थरथर प्रस्फुटन गर्दछ।
रातको चन्द्रमा पहेंलो र सेतो हीरा उच्च आभूषण हार (.98.43 .XNUMX ..XNUMX कुल डायमंड क्यारेट्स)
आकाशका ताराहरूदेखि सूर्यसम्म मरुभूमिको टिब्बा हुँदै पृथ्वीलाई उज्यालो बनाउँछ। ग्रफको जनजातीय एक कामुक, उल्लेखनीय र गहिरो गरीरहेको उच्च गहना स collection्ग्रह हो जुन प्रकृतिको गहिराइ सौन्दर्य र हाम्रो जीवनमा यसको अर्थपूर्ण उपस्थितिको गहिरो आत्म बोल्छ।
ट्यागग्राफ • उच्च गहना
० मा टिप्पणीग्राफ आदिवासी"
यो लेख मा तपाइँ द्वारा साझा गहना को सबै टुक्राहरु धेरै आश्चर्यजनक देखिन्छ। गहना को यी टुक्राहरु मलाई आफ्नो सौन्दर्य संग रहस्यमय छन्। म पक्कै पनि अद्वितीय गहना को यी प्रकार को स्वामी गर्न चाहन्छु। हामी संग यो लेख साझा गर्न को लागी धन्यवाद।
क्लाउडिया कारलेटि क्याम्पोनेसी
तपाइँको दयालु शब्दहरु को लागी धन्यवाद! मँ धेरै खुशी छु तपाइँ यी अद्भुत रचनाहरु लाई मन पराउनुहुन्छ!